Version 0.3.4 – Fixes sy Interview
Novambra 5, 2009 amin'ny tolotra Leave a Comment
Io dikan-fanamboarana sasany bibikely, indrindra ny nalaza ratsy NexGEN Gallery helingelina (izay mety hitranga ho an'ny hafa Plugins mampiasa fomba mitovy). Ny sasany fampisehoana tweaks dia tafiditra, indrindra ho an'ny olona mampiasa MSN mpandika teny (Voamarikao ve dia nitombo ny isan'ny fiteny izy ireo manohana?)
Ny vaovao fa manaova rafitra napetraka tao amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana marina dia midika fa ho mora kokoa ny hanafaka ny hoavy dikan-, sady Ho nambenana tao an-handrindra miaraka amin'ny mari-tomboky repository.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny hoe iza isika sy ny ho avy lalana, Marco avy Technology ao anatin'ny bilaogy no nitarika ny resadresaka miaraka amin'ny ny Ofer Wald. Nice tapa-mamaky teny ho an'ny olona iza no liana ary te hisaotra Marco noho ny faharetana sy ny asa mafy.
Tsindrio eto raha hamaky ity (amin'ny teny anglisy)
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, resadresaka, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin